Uthintelo kunye nokukhuselwa kwizifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini
ezaposwa ngomhla 18.09.2021 19.09.2021
Ngelishwa, asikhuselekanga sonke kwizifo ezosulela ngokwabelana ngesondo. Nokuba ungathini, kodwa ukuba ukhokelela kubomi besondo obusebenzayo kunye nobohlukeneyo, kungekudala unokufumana ukubonakaliswa kwezifo ezinje ngegcushuwa, ukuvuza ngaphantsi, itrichomoniasis, iherpes yesini njalo njalo. Kodwa sinokuwunciphisa umngcipheko wosulelo ngezenzo ezilula kodwa eziqhelekileyo.
Okokuqala, qiniseka ukusebenzisa ikhondom xa usabelana ngesondo neqabane elitsha. Ngaba uyazi ukuba ngoku kukho ukhetho olukhulu kubo, abesilisa nabasetyhini? Ngaphezu koko, ukusebenza kwekhondom yabasetyhini akukho ngaphantsi kwendoda.
Eyona nto inobungozi kwisicwangciso izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini Uhlobo lwesini luyimpundu kunye nelungu lobufazi. Ukwabelana ngesondo ngomlomo ngaphandle kwekhondom kuyingozi, kodwa ukuba xa usabelana ngesondo kwilungu lobufazi / ezimpundu umngcipheko wosulelo ungamashumi amahlanu eepesenti, emva koko ngesondo lomlomo ngama-XNUMX eepesenti.
Ikhondom iyakukhusela ngamashumi alithoba anesithoba, alithoba ngeshumi epesenti, eli nani liphezulu, andithi? Ngelishwa, ukuze ube likhulu leepesenti likhuselekile kwizifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini, kuya kufuneka uyeke isondo ngokupheleleyo, okanye "uzibandakanye" kulo wedwa ngelixa ubukele iphonografi.
Zininzi iindlela zokuzikhusela kwizifo ezosulela ngokwabelana ngesondo, kodwa ukusebenza kwazo kungaphantsi kakhulu kwiikhondom. Oku kuhlamba amalungu esini kunye nokuchopha ngamachiza abulala intsholongwane njengechlorhexidine kunye ne-miramistin. Kodwa umzekelo Ke ii-antiseptics kuphela kunye nekhondom, hayi endaweni yoko!
Hi ndlela leyi, nceda uqaphele ukuba izinto zokuthintela ukukhulelwa (amagwebu, iikhrimu, ii-suppositories, iipilisi) azizukukunceda ukuba udibene nesifo sokuvuza ngaphantsi okanye, nangakumbi usulelo lwe-HIV.
Ungakulibali ubuncinci kube kanye kwiinyanga ezintandathu, kunye nobomi besondo obusebenzayo kunye nokutshintsha rhoqo kwamaqabane - rhoqo, kuvavanyo lwe-venereologist kwaye uthathe lonke uvavanyo oluyimfuneko, kuba uthintelo lwezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo phantse lusebenze ikhondomu, kunye nokukhohlisa kwezifo ezinjalo kubandakanya ukuba kwinqanaba lokuqala akukho nzima ukuyinyanga, kodwa yonke imihla iya isiba nzima ngakumbi.
Kuya kuba ngumdla ukufunda:
Warts: oonobangela kunye nonyango
Iibhaktheriya kunye neentsholongwane ziyisiseko se-microworld
Isifo seSyphilis: iziphumo, isifo kunye neempawu zonyango
Yintoni i-thrush? Ngaba i-thrush idluliselwa emadodeni isuka kubafazi?
Iimpawu ezibonisa ukuba une-AIDS emadodeni
exhonyiweyo impilo kunye neyeza
Edlulileyo Iindlela zesintu zokwandisa amandla
Okulandelayo Ndingasela ibhiya kwisuna?
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,764.